बर्सेनि आउने विपत्ति रोक्न के गर्नुपर्ला ? «
बर्सेनि आउने विपत्ति रोक्न के गर्नुपर्ला ?
प्रकाशित मिति : असार १८, २०७८ शुक्रबार
सिन्धुपलाञ्चोक विपद् प्रभावित जिल्ला हो । भूकम्प र बाढीपहिरोको जोखिम रहेको यो जिल्लाको सीमा चीनसँग जोडिएको छ । भूकम्पले चीनसँगको सम्बन्ध विच्छेदजस्तै बनेयता जिल्लाको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित बनेको छ । यसैगरी बेलाबखत आउने सुख्खा पहिरोले पनि यस जिल्लामा धनजनको क्षति भइरहेको छ । मानवीय साथै विकासका पूर्वाधारमा समेत असर पारेको छ । यसले जिल्लाको आर्थिक क्रियाकलाप पनि उत्तिकै प्रभावित बनेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । भर्खरै पनि मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्र बाढीबाट प्रभावित बन्यो । बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची क्षेत्र अहिले पनि उत्तिकै जोखिममा छ । यसैले जिल्लाबासी प्राकृतिक विपत्तिको भयमा छन् । प्राकृतिक विपत्ति टारेर टर्दैन तर यसका लागि पूर्वसावधानी अपनाउन भने सकिन्छ । बाढी आउने सम्भावित क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिन प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक विपत्ति पछिको राहत, पुनःस्थापनाका लागि पनि राज्य संयन्त्रले सहयोग गर्नुपर्छ । सम्भावित विपत्तिजन्य बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि राज्य संयन्त्रले समयमा नै ध्यान दिनुपर्छ । विपत्तिको सामना सबै मिलेर गर्नुपर्छ । यसै सन्र्दभमा कारोबारकर्मी किशोर बुढाथोकीले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :
सिन्धुपाल्चोकमा जोखिमयुक्त भू–बनोटको अध्ययन जरुरी देखियो
सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश स्थानीय तहमा हिमाल, पहाड र तराईको हावापानी र भूगोलको अनुभव गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि यहाँ कुन स्थानमा कस्तो विपद् हुन्छ भने अनुमान लगाउने निकै गाह्रो छ । विपद् पनि हामीले फरकफरक किसिमको भएको पाएका छौं । स्थानीयबासी, स्थानीय तह र प्राविधिकहरूले सुरक्षित भनेको स्थानमा पनि बाढी आउने, पहिरो जाने भइरहेका छन् । विपद्को प्रकृति फरक छ । कुनै पनि ठाउँमा कहाँ र कतिबेला के हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान लगाउन निकै मुस्किल भएको अहिलेको अवस्था हो ।
जिल्लामा रहेका १२ स्थानीय तहमध्ये जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भोटेकोसी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र जुगल गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जुगलमा पहिरो जाने समस्या अधिक छ भने बाह्रबिसे र भोटेकोसीमा पहिरोका साथै बाढीको जोखिम रहेको देखिन्छ । भोटेकोसी नदीले पनि कटान गर्ने हुँदा तटीय क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा हुनुहुन्छ ।
नदी क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली राख्ने व्यवस्था भइरहेको छ । बाढी आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले चीनको नेलामसँग हामी सम्पर्कमा छौं । चीनतर्फ ताल फुट्नसक्ने, ओभरफ्लो हुनसक्ने सम्भावनाले पनि भोटेकोसी नदी किनारका बासिन्दालाई हरेक वर्ष सताउने गरेको छ । चीनतर्फ बाढी आएको खण्डमा खबर हुने गरी नेलामसँग सम्पर्कमा रहेका हौं । यदि बाढी आएको अवस्थामा चीनतर्फबाट खबर हुनेछ । जसकारण हामीले क्षति बेहोर्नबाट जोगिन सक्छौं ।
अहिले हामीले जिल्लामा करिब एक हजार एक सय परिवार प्रभावित हुनसक्ने प्रारम्भिक आंकलन गरेका छौं । स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिक र स्थानीयबासीको सहयोगमा जोखिम क्षेत्र आकलन गरिएको हो । हालै सुनकोसी गाउँपालिकाको एउटा टोलबासी नौ घर जोखिममा रहेको भन्दै सदरमुकाम आउनुभएको थियो । उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि टेन्ट, खाद्यान्न, औषधिको व्यवस्था भइसकेको छ ।
लामो समयदेखि पहिरोका कारण विस्थापित भएका जुगल गाउँपालिका–१ लिदीबासी अहिले बाँसखर्कमा बसिरहनुभएको छ । हिमाली गाउँ भएकाले टेन्टमा बस्न निकै सकस भएकाले यो बर्खाका लागि हामीले अस्थायी आवास निर्माण सुरु गरिसकेका छौं । नेपाली सेनाको सहयोगमा अहिले जस्तापातासहितको टहरा बनिसकेको छ । यो अबको एक सातामै सबै घरधुरीका लागि बनिसक्नेछ । लिदी पहिरोबाट पूर्णक्षति भएको २८ घर परिवारसहित अहिले ५५ घरधुरीका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो । अबको तीन महिनाभित्र विस्थापित भएका लिदीबासीका लागि स्थायी आवास बनिसक्नेछ ।
पानी पर्ने क्रम बढिरहेको छ । जसले विपद् निम्त्याउने सम्भावना छ । स्थानीयस्तरबाट कुन बस्ती कति जोखिम भन्ने पहिचान गर्न समस्या देखिएको अहिलेको अवस्था हो । अधिकांश स्थानका भू–बनोट जोखिमयुक्त छ भनिएको छ । तर, प्राविधिक नापजाँच नभएकाले आधिकारिक भन्ने छैन । यसका लागि विपद् जोखिम प्राधिकरणको अगुवाइमा जोखिम क्षेत्र पहिल्याउनका लागि अध्ययन अति जरुरी हो ।
कतै जोखिम देखिएमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले तत्काल हेनुपर्छ । स्थानीय तहमा आवश्यक टेन्ट, त्रिपाल, जस्तापाता, खाद्यान्न औषधिको भण्डारण जरुरी छ । त्यसको व्यवस्था पनि भइरहेको छ ।
मेलम्चीको विकास १० वर्ष पछि धकेलियो
प्रमुख, मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक
इन्द्रावती किनारमा रहेको भए पनि मेलम्ची विपद्को दृष्टिले सुरक्षित मानिन्थ्यो । यसअघिका विभिन्न अध्ययनले पनि सुरक्षित स्थान भन्दै आइरहेको थियो । तर, असार १ गते इन्द्रावती र मेलम्चीमा एकसाथ आएको बाढीले मेलम्ची बजार ध्वस्त बनाइदियो ।
स्थानीयस्तरबाट संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार डुबानसहित ७३ घरमा पूर्ण क्षति भयो । अझै एक सय सात घर उच्च जोखिममा छन् । यो तथ्यांक मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नं. ११ को मात्रै हो । बाँकी वडा नं. ६, ७, १०, १३ लाई पनि जोखिम क्षेत्रको सूचीमा राखेका छौं ।
बाढीले विस्थापित भएकाहरूलाई नगरपालिकाले तत्काल नेपाली सेनाको व्यारेक र सुरक्षित रहेको इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा राख्यौं । खाना, बस्नको प्रबन्ध गरेसँगै खोज तथा उद्धारमा हामी लागेका थियौं । अहिले ब्यारेक र विद्यालयमा विस्थापितहरू हुनुहुन्छ । केही काठमाडौं जानुभयो । कति आफन्तकोमा शरण लिइरहनु भएको छ । कतिपयले नयाँ डेरा खोजेर अहिले बसिरहनु भएको छ । भाडामा बसिरहनु भएकालाई नगरपालिकाले भाडा तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कति आफन्तकोमा हुनुहुन्छ, कति काठमाडौं जानु भयो र कति डेरामा हुनुहुन्छ भन्ने एकिन विवरण आइसकेको छैन । हामी विवरण संकलन गर्दैछौं ।
कति सुरक्षित छ भन्नेबारे यहाँको भौगोलिक धरातलको अवस्था हामीले केही अध्ययन नगरेका होइनौ । यूएनडीपीको समन्वयमा हामीले स्थानीय सरकार सुरु भएलगत्तै एउटा प्राकृतिक भौगर्भिक प्राविधिक अध्ययन ग¥यौं । त्यो अध्ययन भूगर्भविद र प्राविधिकले मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको एक सय वर्ष इतिहासलाई लिएर गरेको थियो । एक सय वर्षसम्म भएको घटनाको आधारमा भौगर्भिक अध्ययनको आधारमा नदीबाट दुई सय मिटर पर दूरी राखेर घर बनाउने मापदण्ड बनाएका थियौं । त्यहीअनुरुप नक्सा पासको व्यवस्था ग¥यौं । तर केहीले आफ्नो हिसाबले घर नबनाएका होइनन् । तर भौगर्भिक अध्ययनलाई मान्दा पनि यस्तो प्रलय होला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौ, यो यहाँको नदीको इतिहासमा पहिलो पटक हो । फलस्वरुप हाम्रो एक सय वर्षको इतिहास या प्राकृतिक भौगर्भिक अध्ययनबाट बनाइएको मापदण्डलाई बाढीले फेल खुवाइदिएको छ । नदी बजारबीचसम्म आइपुगेर बगर तुल्यायो । कति क्षति भयो भन्ने मेलम्ची बजारभरको तथ्यांक संकलन गर्न टोली खटाएका छौं, झण्डै १० हजार खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको अनुमान छ । घरहरू बगाए, केही डुबे, अर्बौंको क्षति भएको छ । सयौंलाई घरबारविहीन तुल्यायो ।
चिटिक्क मेलम्ची बजारलाई बाढीले १० वर्ष पछाडि धकेलेको छ । तर अब जे नहुुनु भइसक्यो, अब ५ वर्षमा पुनः व्यवस्थित बनाउने योजनाका साथ काम गर्नेछौं । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने उखान थियो । सत्य सावित भयो । सुरक्षित भनेर कुनै स्थानको भर नहुने रहेछ । अहिले मेलम्ची पीडामा छ । अब हामीले घरबारविहीन भएकालाई तत्काल अस्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउँदै छौं । पीडामा रहेका मेलम्चीबासीलाई जीविकोपार्जनसहितको स्थायी संरचनाको आवश्यक छ । त्यसका लागि नीति बनाएर नगरपालिका अघि बढ्नेछ ।
विपद्को सम्भावना आकलन गरी पूर्वतयारी गरेका छौैं
अध्यक्ष, भोटेकोसी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका विपद्को सम्भावना भएकाले जोखिमस्थल हो । यहाँको भूबनोट बढी भीर भएकाले पहिरोको जोखिममा छ । बाढी पनि उत्तिकै आउँछ । हरेक वर्ष साना ठूला बाढीले क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ ।
कोदारी राजमार्गको लार्चा, कोदारी, फुल्पिङकट्टी बाढीको जोखिममा छ । त्यस्तै बुल्कुटे, लिस्ती, पाउगुम्बा नारायणथानको च्यामडाँडा पहिरोको जोखिममा छ । गएको वर्ष बुल्कुटेको बाढी पहिरोमा तीन घर बगे । चारजना अझै बेपत्ता छन् । लार्चामा पनि घरहरू बगे । भौतिकसहित मानवीय र पशु चौपायाको क्षति भयो ।
जोखिमस्थान पहिचान गरिएका बस्तीमध्ये करिब ८० घर जोखिममा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ । जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहनु भएकाहरू आर्थिक अवस्था राम्रो हुने काठमाडौं या अन्य बजारमा जानुभएको छ । निम्न आय भएकाहरू यतै हुनुहुन्छ । उहाँहरूका लागि तत्काल सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि टेन्ट, त्रिपाल, खाद्यान्नलगायत सामग्री दिइएको छ ।
स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न काम गरेको छ । विपद न्यूनीकरणका लागि पनि अझै प्रयास जारी छ । बाढीको जोखिम भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा नबस्न सुझाएका छौं । हामी राजनीति गर्नेहरूले जनताको ख्याल राख्नुपर्छ उहाँको सेवामा खटिनुपर्छ । जनता बचाउन नसके केका लागि राजनीति गर्ने भन्ने मनसायले हरेक वडामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय छ । डाँडा खस्न सक्ने सम्भावना भएका टोललाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेका छौं । कतिपय घरधुरी आफ्नो थातथलो छाडेर सुरक्षित स्थानमा हुनुहुन्छ ।
विपद् कति बेला हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुन्न । त्यसको तयारीका लागि तुरुन्तै आवश्यक पर्ने सामग्री स्टोर गरिराखिएको छ । जोखिम क्षेत्रमा रहेर घरबारविहीन भएकाको परिवारका लागि हामीले स्थायी संरचना बनाउने नीति बनाएका छौं । त्यसका लागि यो गाउँसभाबाट ३७ लाख विनियोजन गरेका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा बन्ने आवास निर्माणका लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो । केन्द्रीय नीतिअनुसार विपद् पीडितका लागि स्थानीय तहले १० प्रतिशत लगानी गनुपर्ने हुन्छ ।
निजी क्षेत्रबाट पनि प्राकृतिक विपद्मा सहयोग भइरहेको छ
होमबहादुर श्रेष्ठ (राजकुमार)
अध्यक्ष, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ
सिन्धुपाल्चोकमा अन्य जिल्लाको तुलनामा कोरोना संक्रमण पनि बढेकै हो । सरकारी र गैरसरकारी निकायले रोग नियन्त्रणका लागि अनेकौं जुक्ति नलगाएको पनि होइन । तर पनि जिल्ला अझै जोखिममा छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरीय विपद् समिति सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय खट्नु जरुरी छ । जिल्लाका सरोकारवाला समितिले मात्रै नसक्ने अवस्था हो यो । यस अर्थमा सबै सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रलगायत सबै जुट्नु जरुरी देखिन्छ ।
सिन्धुपाल्चोक कोरोनासँगै हरेक वर्ष विपद् झेल्ने जिल्ला हो । स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको देखेकौ छौं । स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारले नगरेको र असम्भव काम हामी निजी क्षेत्रले गर्ने हो । हामी हाम्रा व्यवसायी र जिल्लाबासीको हकहितका लागि जुटन तयार छौं । किनकि यो वाणिज्य संघ जिल्लाको सबै सानाठूला व्यवसायीको संस्था हो ।
उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकले हालसम्म विपद्मा जिल्लामा ९० हजार मास्क, सेनिटाइजर १२ सय लिटर, ग्लोब्स १२ सय जोर, १ हजार १४ पीपीई, थर्मल ४ सय थान, अक्सिमिटर १२, अस्क्सिजन कन्सेट्रेटर सहयोग गरेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश स्थानीय तहमा हिमाल, पहाड र तराईको हावापानी, भूगोलको अनुभव गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि यहाँ कुन स्थानमा कस्तो विपद् हुन्छ भने अनुमान लगाउने निकै गाह्रो छ । विपद् पनि फरकफरक किसिमको भएको हामीले पाएका छौं । स्थानीयबासी, स्थानीय तह र प्राविधिकहरूले सुरक्षित भनेको स्थानमा पनि बाढी आउने, पहिरो जाने भइरहेका छन् । विपद्को प्रकृति फरक छ । कुनै पनि ठाउँमा कहाँ र कतिबेला के हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान लगाउन निकै मुस्किल भएको अहिलेको अवस्था हो । त्यसैले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको हो ।
हामी सामाजिक संस्था हो । सबैको हितका लागि काम गुर्नपर्छ । जिल्लाको सबै क्षेत्र, गाउँ, बस्तीमा हामी पुग्नुपर्छ र सकेको पुगेकै छौं । सामाजिक संस्था भएकाले सामाजिक काम गर्ने र समुदायलाई सुरक्षित राख्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामी यसमा काम गर्नेछौं ।
#सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ
बजार नियन्त्रण गर्ने नीतिले सेयर निरन्तर घट्यो : पोखरेल
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले सरकारी नियामक निकायले सेयर बजारलाई लगाम लगाउने
पुल र सडकका लागि ९६ करोड बजेट विनियोजन
जिल्लामा सडक तथा पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ९६ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ
स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको निर्माण व्यवसाय
आज बुधबार निर्माण दिवस हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका संघसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रमसहित यो दिवस
ओमिक्रोन भाइरसविरुद्ध सीमामा उच्च सतर्कतासँगै खोप अभियान
कोरोना भाइरस संक्रमणको अर्को उत्परिवर्तन (ओमिक्रोन) भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार वीरगन्जमा उच्च